Jiangsu Gostern Rigging Co. , Ltd.
အလျားလိုက် Lifting Beam စီးရီး
အမေရိကန်အတုပုံစံ turnbuckles များကိုတင်းကျပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
link ကွင်းဆက် accessaires
လေးညှစ်မြှုပ်နေသော WLL ABCDE ...
သံမဏိ billet ညှပ်
သံမဏိပြားတစ်ခု billet ညှပ်ရထားညှပ်: အဓိက ...
ပစ္စည်း: မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို polyester (100% PES) အန္တရာယ်ကင်း ...
T (၈) ခြေထောက်တစ်ချောင်းကြိုးကြိုး Standard GB / T2 ...
တစ်ခုနှင့်နှစ်ခု -leg ဝါယာကြိုးကြိုးလောက်လွှဲ
Art.No. Dia （NWKg၊ ) Breaking တစ်ခုတည်း WLL နှစ်ဆ Art.No. Dia （NWKg၊ ) Breaking တစ်ခုတည်း WLL နှစ်ဆ
အချင်း ဝန် KN KN အချင်း ဝန် KN KN
(မီလီမီတာ) (ကီလိုဂရမ်)0° 45 ° / 90 ° (မီလီမီတာ) (ကီလိုဂရမ်)0° 45 ° / 90 °
ZS0204010 10 ၀.၂၁ 60 10 ၁၈/၁၄ ZS0204118 118 41.58 7800 1300 2410/1830
ZS0204012 12 ၀.၃၅ 100 16 30/20 ZS0204135 135 ၄၆.၉ 10200 1700 3100/2400
ZS0204016 16 0.59 180 30 ၅၆/၄၀ ZS0204148 148 ၅၅.၇၉ 12000 2000 3700/2800
ZS0204019 19 ၀.၈၄ 240 40 74/56 ZS0204160 160 65.52 14400 2400 4400/3400
ZS0204023 23 ၁.၅၁ 380 63 117/88 ZS0204172 172 76.3 16800 2800 5200/4000
ZS0204029 29 ၂.၃၆ 480 80 ၁၄၈/၁၁၃ ZS0204184 184 ၈၉.၆ 18000 3000 5500/4200
ZS0204034 34 ၂.၈၆ 600 100 185/141 ZS0204196 196 ၁၀၂.၂ 20400 3400 6300/4800
ZS0204040 40 ၃.၉၉ 900 150 278/212 ZS0204208 208 ၁၁၅.၅ 23800 3800 7000/5370
ZS0204046 46 ၆.၀၂ 1200 200 370/282 ZS0204220 220 ၁၂၉.၅ 25200 4200 7700/5940
ZS0204054 54 ၇.၆၃ 1500 250 463/353 ZS0204234 234 ၁၄၄.၂ 28200 4700 8700/6600
ZS02060 60 ၉.၄၅ 2000 320 592/451 ZS0204246 246 ၁၅၉.၆ 31200 5200 9600/7350
ZS02067 67 ၁၁.၄၁ 2400 400 740/564 ZS0204258 258 ၁၇၅.၇ 34200 5700 10500/8000
ZS02075 75 ၁၃.၅၈ 3000 500 925/705 ZS0204276 276 201.6 39600 6600 12200/9300
ZS0204080 80 ၁၅.၉၆ 3600 600 1110/850 ZS0204295 295 ၂၂၉.၆ 45000 7500 13800/10600
ZS0204087 87 ၁၈.၄၈ 4200 700 1300/990 ZS0204306 306 ၂၄၉.၂ 49200 8200 15200/11600
ZS0204095 95 ၂၄.၁၅ 4800 800 1480/1130 ZS0204324 324 280 55200 9200 17000/13000
ZS0204100 100 ၂၇.၃ 5880 980 1810/1380 ZS0204336 336 301.7 59400 9900 18000/14000
Flemish Eye သွပ်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည့်ကြိုးကြိုး
6x25 တောက်ပသော EIPS IWRC
၁-၁ / ၈ "
6x36 တောက်ပသော EIPS IWRC
၁-၁ / ၄ "
၁-၃ / ၈ "
မတူညီသောတစ်တန်နှင့်အတူ 30 ° 45 ° 60 °
ထရန်စဖော်မာ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနှင့်အထူးစက်ယန္တရားများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက်အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ပူးတွဲမပါဘဲဝါယာကြိုးကြိုး၏နိမ့်ကျိုးအားထုတ်မှုအလုပ်လုပ်ဝန်၏6ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါယာကြိုးကြိုးလောက်လွှဲကိုမှာယူသောအခါအရှည်၊ အချင်း၊ တည်ဆောက်မှု၊ lay၊
အရှည် - လိုချင်သောအရှည်အတိအကျကိုဖော်ပြပါ အစက်တပ်ထားသောအမြှပ်များကဲ့သို့သောပါးလွှာသည့်ချိတ်များသို့မဟုတ်ချိတ်များတပ်ဆင်ရာတွင်အံ ၀ န်းမှအစသို့အဆုံးကြိုးအတိအကျကိုသတ်မှတ်သည်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားဖြင့်ပုံကြမ်းတစ်ခုကိုတင်ပါ။
အချင်း - ဝါယာကြိုးကြိုး၏အစစ်အချင်းမှာစက်ဝုိင်းတစ်ခု၏အချင်းဖြစ်သည်။ အချင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် caliper ကိုအသုံးပြုရာတွင်ကပ်လျက်ကြိုးများကို ဖြတ်၍ တိုင်းတာခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး: 6X19, 6X37, 7X19 သို့မဟုတ်အခြားရှိမရှိအကြံဥာဏ်။
လေး - ပုံမှန်လား (ညာဟနန်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်လက်) လားသေချာပေါက်ပြောပါ။ သို့မဟုတ် lang lay (လက်ယာလက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်လက်ဝဲလက်) လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ မသေချာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ စံလေ့အကျင့်မှာ Right Hand Regular (သာမန်) Lay ကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘယ်ဘက်လက် Regular (သာမန်) Lay ကို cable tool drilling သို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါကဖော်ပြရန်သေချာပါစေ။
Core: ဖိုင်ဘာ core ကို (FC) သို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောဝါယာကြိုးကြိုး core ကိုဆန္ဒရှိရှိမရှိညွှန်ပြ။
သွပ်ရည်စိမ်လက် Spliced ​​ဝါယာကြိုးကြိုးလျှံ
PVC Coated ဝါယာကြိုးကြိုးလျှံ
Thimble နှင့် ferrule
လိပ္စာ: အမှတ် ၁၈၈၊ Longgang လမ်း၊ Gaogang ခရိုင်၊ Taizhou City, 225300, Jiangsu, China